POWERPOINT အတွက်စားပွဲတစ်ခုလုပ်ဖို့ကိုဘယ်လို - POWERPOINT - 2019
PowerPoint အတွက်စားပွဲတစ်ခု Create
Skype ကိုလျှောက်လွှာနှုတ်ကပတ်တော်ပုံမှန်အတိုင်းသဘောအရဆက်သွယ်ပြောဆိုရန်သာဖြစ်ပါသည်။ ဒါဟာဖြင့်သင်သည်နောက်တစ်ကြိမ်အလားတူထုတ်ကုန်ကျော်ဤအစီအစဉ်၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုမီးမောင်းထိုးပြရာ, ဖိုင်တွေ, စမ်းချောင်းဗီဒီယိုများနှင့်ဂီတကိုလွှဲပြောင်းပေးနိုင်သည်။ Skype ကို၏အကူအညီနှင့်အတူဂီတကစားရန်မည်သို့မည်ပုံကိုကြည့်ကြရအောင်။
ကံမကောင်းစွာပဲ, တစ်ဦး Skype ကိုဖိုင်တစ်ဖိုင်ကနေ, ဒါမှမဟုတ်ကွန်ယက်ကနေအသံလွှင့်ဂီတအဘို့အဘယ်သူမျှမ built-in tools တွေရှိပါတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်, သငျသညျပိုမိုနီးကပ်စွာမိုက်ခရိုဖုန်းမှသင့်ရဲ့စပီကာရွှေ့နှင့်အရှင်ထုတ်လွှင့်ထုတ်သယ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့အရည်အသွေးမြင့်နားထောင်မည်သူမည်သူမဆိုကျေနပ်လိမ့်မယ်အသံမှမဖြစ်နိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, သူတို့သည်သင်၏ခန်းထဲမှာရာအရပျကိုယူပြီးဖြစ်ကြောင်းပါတီအသံများနှင့်စကားစမြည်နားထောင်မည်။ ကံကောင်းထောက်မစွာ, Third-party applications များမှတစ်ဆင့်ပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်မယ့်နည်းလမ်းတွေရှိပါတယ်။
Method ကို 1: Virtual ပေး Audio Cable ကို Install
Virtual ပေး Audio Cable ကိုသေးငယ်တဲ့ application ကိုကူညီ Skype ကိုအတွက်ဂီတ၏အရည်အသွေးမြင့်အသံလွှင့်များ၏ပြဿနာကိုဖြေရှင်း။ ဒါဟာကို virtual သို့မဟုတ်ကို virtual မိုက်ခရိုဖုန်း cable ကိုတစ်ဦးကြင်ကြင်နာနာဖြစ်ပါတယ်။ အင်တာနက်ပေါ်ရှိဤအစီအစဉ်အတော်လေးရိုးရှင်းတဲ့ဖြစ်ပါသည်, သို့သော်အကောင်းဆုံးဖြေရှင်းနည်းတရားဝင် site ကိုသွားရောက်ကြည့်ရှုဖို့ဖြစ်ပါတယ်ရှာပါ။
Download ကို Virtual ပေး Audio Cable ကို
ကျနော်တို့အစီအစဉ်ကိုဖိုင်များကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ပြီးနောက်, စည်းကမ်းအဖြစ်, ထိုသူတို့ archive ကိုဖွင့်လှစ်ခြင်း, archive ကိုတည်ရှိသည်။ သင်၏ system (32 သို့မဟုတ် 64 bit နဲ့) ၏နည်းနည်းပေါ် မူတည်. ဖိုင်ကို run setup ကို သို့မဟုတ် setup64.
တစ်ဦးကပေးတဲ့ dialog box ကိုကမ်းလှမ်းမှု archive ကိုအထဲကဖိုင်တွေဖယ်ရှားပစ်ရန်ပုံရသည်။ ခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "အားလုံး Extract".
Next ကိုကျနော်တို့ဖိုင်များကို extract တစ် directory ကို select လုပ်ပါသတိပေးခံရနေကြသည်။ သငျသညျကို default အဖြစ်ပြုလုပ်ထားခဲ့နိုင်သည်။ ခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "Extract".
ယခုပင်လျှင်အဆိုပါထုတ်ယူ folder ထဲမှာဖိုင် run setup ကို သို့မဟုတ် setup64သင်၏ system configuration ကိုပေါ် မူတည်. ။
လျှောက်လွှာကို install သောအခါ, ကျနော်တို့ကခလုတ်ကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့်လိုင်စင်စည်းကမ်းချက်များကိုသဘောတူဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်တဲ့ window ကိုဖွင့်လှစ် "ငါသည် accept".
ချက်ချင်းလျှောက်လွှာကို install စတင်ပါရန်, ဖွင့်လှစ်သောပြတင်းပေါက်၌ button ကို click "Install".
ထိုနောက်မှလျှောက်လွှာစတင် install လုပ်သဖြင့်, operating system ကိုစသင့်လျော်သောယာဉ်မောင်းများထည့်သွင်းပါ။
တပ်ဆင်ပြီးနောက်ညာဘက်သင့်ရဲ့ PC ကို၏အသိပေးချက်ကိုဧရိယာထဲမှာစပီကာ icon ကို click ပါ, ပြည့်စုံမယ် Audio Cable ကို Virtual ဖြစ်ပါတယ်။ ဆက်စပ်မီနူးထဲမှာ, select လုပ်ပါ "ပြသမှု Device ကို".
တစ်ဦးက window ကိုပြန်ဖွင့်ထုတ်ကုန်များစာရင်းကိုနှင့်အတူဖွင့်လှစ်။ သင် tab မှာတွေ့နိုင်ပါသည်အဖြစ် "ပြသမှု" ပြီးသားအနေနဲ့ကမ္ပည်းရှိခဲ့ "လိုင်း 1 (Virtual ပေး Audio Cable ကို)"။ ညာဘက်မောက်စ်ခလုတ်ကိုနှိပ်ပြီးတန်ဖိုးကိုသတ်မှတ်ပါ "ပုံမှန် Make".
ထို့နောက် tab ကိုသွားပါ "မှတ်တမ်း"။ ဒီနေရာမှာအလားတူမီနူးဖြစ်စေတဲ့လည်းဆန့်ကျင်နာမတျော၏တန်ဖိုးကိုသတ်မှတ်ပါ လိုင်း 1 "ပုံမှန် Make"ဒါကြောင့်သူတို့ကိုတာဝန်ပေးမထားလျှင်။ ကြောင်းကို virtual ကိရိယာအမည်ကိုအပေါ်ကိုထပ်ကလစ်နှိပ်ပါပြီးနောက် လိုင်း 1 နှင့် Context Menu က၌, select လုပ်ပါ "Properties ကို".
ကော်လံထဲမှာဖွင့်လှစ်သောပြတင်းပေါက်၌ "ဟုအဆိုပါယူနစ်ကနေ Play" နောက်တဖန့် dropdown list ကနေ select လုပ်ပါ လိုင်း 1။ ထိုနောက်မှခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "အိုကေ".
Next ကိုကျနော်တို့အစီအစဉ်ကို Skype ကိုတိုက်ရိုက်သွားပါ။ မီနူးကို item ကိုဖွင့် "Tools"ထိုအခါကို item ပေါ်တွင်နှိပ်ပါ "ဆက်တင်များ ... ".
ထို့နောက်အခန်းကိုသွားပါ "အသံက Settings".
အဆိုပါ setting ကိုပိတ်ပင်တားဆီးမှု "မိုက်ခရိုဖုန်း" တစ်ဦး dropdown list ကနေ select လုပ်ပါတဲ့အသံဖမ်းစက်ကိုရွေးချယ်ရေးလယ်ပြင် "လိုင်း 1 (Virtual ပေး Audio Cable ကို)".
တိုက်ရိုက်အခုတော့သင့်ရဲ့တင်ပါတယ်သင်၏စပီထုတ်ဝေဘူးသောတူညီသောအရာတို့ကိုနားထောငျပါမညျ, ဒါပေမယ့်သာ, ဒါကြောင့်ပြောဆိုရန်။ သင်တစ်ဦးဂီတထုတ်လွှင့်ဖြန့်ချိရန်, သင်၏ကွန်ပျူတာနှင့်အသံကစားသမားများပေါ်တွင် install ဆိုအပေါ်တင်ပါတယ်၏လူတစ်ဦးသို့မဟုတ်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့နှင့်အဆက်အသွယ်ဂီတကစားနိုင်ပါတယ်။
ထို့အပြင်အနေဖြင့်စစ်ဆေးမှုများအမှတ်အသားဖယ်ရှားခြင်း "အလိုအလျှောက်မိုက်ခရိုဖုန်းညှိနှိုင်းမှု Allow" သငျသညျကို manually transmit ဂီတ၏အသံအတိုးအကျယ်ချိန်ညှိနိုင်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့်ကံမကောင်းစွာဘဲဒီနည်းလမ်းကိုအားနည်းချက်များရှိနေသည်။ ပထမဦးစွာအပေါင်းတို့၏, ထိုလက်ခံရရှိပါတီသာဖိုင်တစ်ဖိုင်ကနေဂီတကိုနားထောငျပါမညျနှင့်အသံလွှင့်နေတဲ့ကာလအတွက်ယေဘုယျအား transferor အမှန်တကယ်အသံ output ကိုကိရိယာ (စပီကာသို့မဟုတ်နားကြပ်) ကို turn off ပါလိမ့်မယ်ကတည်းကနှစ်ဖက်, တစ်ဦးချင်းစီကတခြားတွေနဲ့ဆက်သွယ်နိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေဖြစ်ပါတယ်။
Method ကို 2: Skype ကိုများအတွက်အသုံးပြုမှု Pamela
တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအပိုဆောင်း software ကို install လုပ်ပါသဖြင့်အထက်ပါပြဿနာကိုဖြေရှင်း။ ဤသည်အများအပြားဒေသများရှိ Skype ၏လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုချဲ့ထွင်ဖို့ဒီဇိုင်းမှာပြည့်စုံသောလျှောက်လွှာဖြစ်သော Skype ကိုများအတွက် program တစ်ခု Pamela ဖြစ်ပါသည်။ ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ကသာဂီတထုတ်လွှင့်စည်းရုံးရေးများ၏ဖြစ်နိုင်ခြေ၏စည်းကမ်းချက်များ၌စိတ်ဝင်စားလိမ့်မယ်လို့ယခုဖြစ်ကြသည်။
Skype ကိုများအတွက် Pamela မှထုတ်လွှင့်ဂီတ Organize အထူး tool ကိုအတူရရှိနိုင်ပါသည် - "အသံကစားသမားစိတ်ခံစားမှု"။ ဒီ tool ၏အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာ - နဲ့ WAV format နဲ့အသံဖိုင်တွေကိုအစုတခုကတဆင့်စိတ်ခံစားမှုကို transfer (လက်ခုပ်သံတစ်ဦးသက်ပြင်းချ, တစ်စည်, etc) ။ သို့သော်အသံကစိတ်ခံစားမှုတစ်ခုကစားသမားလည်းငါတို့လို, MP3, WMA နှင့် OGG အတွက်ပုံမှန်ဂီတဖိုင်တွေထည့်နိုင်သည်။
Pamela Skype ကိုများအတွက် Download
Skype ကိုများအတွက် Skype ကိုအစီအစဉ်နှင့် Pamela run လိုက်ပါ။ main menu ကိုခုနှစ်, Skype ကိုများအတွက် Pamela ပစ္စည်းအပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "Tools"။ drop-down list ထဲမှာ, ရာထူးကို select "Show ကိုစိတ်ခံစားမှုကစားသမား".
ပြေးပြတင်းပေါက် audio player ကိုစိတ်ခံစားမှု။ ကျွန်တော်တို့ကိုကြိုတင်အသံကဖိုင်တွေရဲ့စာရင်းဖွင့်လှစ်ခြင်းမပြုမီ။ အောက်ခြေက scroll ။ အဆိုပါစာရင်း၏အလွန်အဆုံးမှာခလုတ်တစ်ခုရှိပါတယ် "Add" အစိမ်းရောင်လက်ဝါးကပ်တိုင်အဖြစ်။ ဒါကြောင့်ပေါ်တွင်ကလစ်နှိပ်ပါ။ နှစ်ခုပစ္စည်းများနှင့်အတူ Context Menu ကဖွင့်လှစ်: "စိတ်လှုပ်ရှားမှု Add" နှင့် "ဟုအဆိုပါစိတ်ခံစားမှုတစ်ခု folder ကို Add"။ သငျသညျတစ်ခုတည်းဂီတဖိုင် add သွားနေတယ်ဆိုရင်, ထို့နောက်ပထမ option ကိုရွေးပါ, သို့သော်သင်ပြီးသားအပုဒ်တစ်ခုပြင်ဆင်ထားအစုံနှင့်အတူသီးခြားဖိုင်တွဲရှိပါက, ထို့နောက်ဒုတိယအပိုဒ်အဘို့ကိုရပ်တန့်။
window ကိုဖွင့်လှစ် ဉီးစီး။ ဒါဟာဂီတနှင့်အတူဂီတဖိုင်သို့မဟုတ်ဖိုင်တွဲသိမ်းဆည်းသော directory ကိုသွားဖို့လိုအပ်ပါသည်။ အရာဝတ္ထုကို Select လုပ်ပါနှင့် button ကို click "ပွင့်လင်း".
သင်တို့သည်ဤခြေလှမ်းများပြီးနောက်ကြည့်ရှုနိုင်သကဲ့သို့, ရွေးချယ်ထားသောဖိုင် name ကိုပြတင်းပေါက်ထဲမှာဖော်ပြပါတယ် audio player ကိုစိတ်ခံစားမှု။ ဒါကြောင့်ကစားရန်ကျနော်တို့အမည်ပေါ်တွင်ကို double-click နှိပ်. ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။
ထို့နောက်ဂီတဖိုင်ကစား start နှင့်အသံနှစ်မျိုးလုံးတင်ပါတယ်ကွားရပါလိမ့်မည်။
တူညီသောထုံးစံ၌ဂီတဖွဲ့စည်းမှုကဆက်ပြောသည်နှင့်အခြားနိုင်ပါသည်။ ဒါပေမယ့်လည်းဒီနည်းလမ်းကို၎င်း၏အားနည်းချက်များရှိသည်။ လူအပေါင်းတို့၏ပထမဦးစွာပြုလုပ်ပြသစာရင်းများကိုဖန်တီးရန်နိုင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့်တစ်ဦးချင်းစီဖိုင်ကိုကိုယ်တိုင်စတင်ခံရဖို့ရှိသည်လိမ့်မယ်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, Skype ကိုများအတွက် Pamela တဲ့အခမဲ့ဗားရှင်း (အခြေခံပညာ) တဦးတည်း session တစ်ခုအတွင်းမှာအချိန်ထုတ်လွှင့်သာ 15 မိနစ်ပေးပါသည်။ အသုံးပြုသူကဒီကန့်သတ်ဖယ်ရှားပစ်ရန်လိုလားပါက paid version ကို Professional ကဝယ်ယူရန်ရှိသည်လိမ့်မယ်။
သင်တို့ကိုတွေ့မြင်နိုင်သကဲ့သို့ဆန္ဒရှိလျှင်, စံ tools များကအင်တာနက်ထဲကနေနှင့်သင့်ကွန်ပျူတာပေါ်မှာဖိုင်တွေထဲကဂီတထုတ်လွှင့် Skype ကိုတင်ပါတယ်မပေးပါဘူးဆိုတဲ့အချက်ကိုရှိနေသော်လည်းတစ်ဘာသာပြန်ချက်စီစဉ်ပေးနိုင်ပါသည်။